Sida loo helo lammaane - Talooyin ku saabsan shukaansiga Ragga qaabdhismeedka leh | Ragga Stylish
Jacaylku wali waa habka koowaad ee diirada loogu saarayo nolosha dad badan. Jidhku wuxuu u bartay inuu ahaado kali, laakiin madaxaagu wuu ogyahay inuu u baahan yahay jacaylkaas, shirkad qof kale leeyahay. Laakiin waxaa jira fursado badan oo la bixiyo si loo helo lammaane, iyo inbadan oo teknoolojiyad cusub ah, oo wax badan ka caawiya.
Raadinta lammaane waa maaddo raaxo leh oo kaa dhigaysa inaad mar kale ka fikirto dhalanteedka, laakiin dhanka kale niyad jab iyo niyad jab. Taasi waa sababta ay ugufiicantahay in loo wajaho rabitaankan qaab dhex dhexaad ah, iyadoo aan laqasrin, ama lagu deg degin, ama dib udhac lahayn Inta badan lagama maarmaanka ah waa daqiiqadda raadinta lammaane, inta ka sii murugsan ayay annaga noola muuqan kartaa.
1 Helitaanka lammaane ma dhib baa mise waa maya?
2 Maxaan u heli waynay lammaane?
3 Sideen ku helaa lammaane?
Helitaanka lammaane ma dhib baa mise waa maya?
Yeynaan u dulqaadan waali. Waxay noqon kartaa mid aan dhib badnayn in la helo fursado ballaadhan oo haween ah oo isku nacayb ah, runtiina waan samaynnaa. Laakiin ficil ahaan taasi waxay ka dhigan tahay taas, inta u dhexeysa dhammaan ballantan, ha imaanin si nabad ah hana ugu shaqeyn sidii la rabay. Xaqiiqadani yaan lagu xadidin xadka fursadaheena, waa xaqiiqo soo noqnoqota marar badan.
Waxay yiraahdaan waxa ugu horeeya ee la helo lamaane joojiya raadinta iyada, laakiin waa wax run ahaantii umuuqda been. Waa inaad ahaataa mid diirada saaraya una furan fursadaha helitaanka jacaylka, laakiin adigoon waligaa ubaahan gacanta koowaad. Sidoo kale waa inaad ka fikirtaa baahida loo qabo inaad wanaag dareento, ku raaxeysiga cidlo, iyadoo ay suurta gal tahay in aad la baashaashid qofkii aad rabto.
Maxaan u heli waynay lammaane?
Aaggeenna raaxada Waxay ka dhigtay in badan oo naga mid ah inaan yeelano qoys iyo saaxiibo noogu dhow dhow kooxdayada ugu dhow, qaar badan oo ka mid ah oo ay weheliyaan lammaanayaashooda. Kama sii gudbi doonno xadka mana awoodno inaan u baxno si aan ula kulanno wax muuqda oo dabiici ah, mar haddii ay innagu koobayso xishoodkeenna iyo raaxadeena.
Waqti la’aan waa caqabad kale Maxaa kale oo keena xaaladdan. Waxaan sidoo kale ka heli karnaa meelo kale waana habkayaga xiisaha leh ee aan ku raadinayno lammaane, sidoo kale ilaaliyo maqaamkeena bulsheed ama aan dareemo dhaawac kala jaceyl jaceyl dhowaanahan. Mawduucyadan waxaa laga heli karaa sida looga gudbo kala goynta o sida loo iloobo qofkaagii hore.
Qodob kale oo muhiim ah oo ka hor imanaya go'aankan ayaa ah isku kalsooni la’aan. Adigoon rabin inaad banaanka u baxdo, ama aad la dhex gasho bulshada, waxaa aad ugu adag soo jeedinta in la helo lammaane si uu u noqdo mid aan run ahayn. Hadaadan jeclayn nolosha baararka markasta Waad ku biiri kartaa jimicsiga ama kooxaha dadka halkaas oo ay ku galaan dalxiisyo, safarro ama booqashooyin dhaqameed, Waan hubaa in kulamadan aad kula kulmi doonto dad aad u tiro badan oo aad u xiiso badan qaab shaqsiyeed.
Sideen ku helaa lammaane?
Raadinta lammaane ama raadinta qof aad la seexato isku mid maahan. Xaqiiqda rabitaanka helitaanka qof aad nolosha la wadaagto waa halisSidaa darteed, waa fikrad inaad ku qasban tahay inaad miisaan culus samayso. Waa inaan ogaano inaan diyaar garownay oo ogaano inaynaan argagax geli doonin.
Waa inaan ka tagnaa guriga oo aan haysannaa bartaas ujeeddada. Waa inaad la baxdaa asxaabtaada iyo qoyskaaga, dadka kula shaqeeya iyo inaad ka walwasho la kulanka dadka cusub. Isku day inaad soo noqnoqoto meelaha ay ku soo noqnoqoto si aad u hesho wajiyo cusub waxaana la abuuray jawi bulsho oo furan. Meelaha iyo dariiqooyinka ay haystaan ​​ayaa kaa caawin kara: inay iska diiwaangeliyaan fasalo nooc ka mid ah isboortiga ah, galaan safarro kooxeed sida safarka iyo booqashada matxafyada muhiimka ah; isqorista fasalada koorso laxiriira hiwaayadeena ama inaad barato xirfado cusub oo xiiso leh ...
Adeegso astaamaha shukaansiga ee ku jira internetka. Waa dariiqa shukaansiga iyo la kulanka dadka, oo leh fursado badan oo kala duwan sidoo kalena waa moodel. Laakiin waa inaad taqaanaa sida loo isticmaalo barnaamijkan noocan ah, waayo way ku adag tahay inay waxtar yeelato. Habkani wuxuu u adeegaa inuu dadka ugu dhawaado kuwa kale oo aan u dhowaan karin dadka kale, sababo kala duwan awgood.
Si aad u adeegsato macnaha shukaansiga, waa inaan awoodnaa inaan aqoonsano saldhigyadayada iyo kuwa naloo soo bandhigay, mar haddii jahwareer badani ka jiro nooca dadka aan la kulmi karno. Waxaan abuuri karnaa wada hadallo farshaxan ah waxaanan ogaan karnaa in xaqiiqadan ay tahay in lagu dhaqmo, sameynta ballan berri shaqsi ahaan berri. Marka raadso hadaf fudud oo waxtar leh, Way yara adag tahay, laakiin sida caadiga ah kuwa bixiya rukunka gudahood websaydhadan ama barnaamijyadu waa sababta oo ah waxay runtii rabaan wax culus.
Sida loo eego iyo sharaxaadda kama dambaysta ah, Waa inaad samirto. Muddo 20 sano ah, dhacdooyinku waa kuwo dhakhso badan oo kacsan markasta, laakiin sanadihii la soo dhaafay waxaan noqonay kuwo aad u baahan oo aan iska indhatirno dulqaadka. Haddii taariikhda ugu horreysa aysan u dhicin sidii aan filaynay, laga yaabee kuwa sii socda inay ka sii khaas ahaadaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo helo lammaane